चोलेन्द्रसमशेर जबराला अपराधीलाई जोगाएको आरोप - Nayapul Online
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले आइतबार बोलाएको छ । उजुरीकर्ताहरूसँग शुक्रबार छलफल गरेपछि समितिले जबरासँग छलफल गर्न लागेको हो ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा ९ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ८ वटा जबराले विगतमा गरेका फैसाला र एउटा व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित छ । कतिपय आरोप भने गालीगलौजले भरिएका पनि छन् ।
अपराधीलाई जोगाएको आरोप
उजुरीकर्तामध्येकी एक माइली तामाङले जबरालाई माफियाको संज्ञा दिँदै पदबाटै हटाउन माग गरेकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिका-६ की ७२ वषर्ीय माइली तामाङका नाममा संसदीय सुनुवाई समितिमा परेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘चोलेन्ऽ समशेरलाई प्रधानन्यायाधीश त कुरै छाडौं, न्यायाधीशमा पनि एकछिन राख्न मिल्दैन । आपराधिक पृष्ठभूमि भएकालाई कसरी न्यायाधीश पदमा राख्ने ? निजलाई हटाउनुपर्छ ।’
माइलीका वारेसमार्फत दर्ता गरिएको उजुरीमा जबरा माफियाहरुद्वारा सञ्चालित रहेको आरोप लगाइएको छ । ‘प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको रामकुमार प्रसाद साहलाई गुमराहमा पारी ज्ञानेन्द्र शाहको फुपूका छोरामार्फत वासिङ्टन डीसीमा आफ्नो मानिस र आफ्नो नाममा बैंकमार्फत घुस लिएको कुरा पुष्टि भई आएको छ’, उजुरीमा लेखिएको छ, ‘ज्ञानेन्द्र शाहको फुपूका छोरा मार्फत १५ करोड असुल्नु र उक्त समय अथवा मिति ६ असार ०७२ का दिन चोलेन्द्र समशेर माफियाद्वारा फैसला हुनु र प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजो कायम गराउनुले उनी माफिया र घुसखोरी भन्ने कुरामा विवाद छैन् ।’
‘डा. गोबिन्द केसीसँको सम्झौतामा कार्यन्वयन हुनेमा शंका नगरौं’